सर्टिफिकेट धितोमा राखेर विना ब्याज ऋण पाईंदै ! असार १९ भित्र आवेदन दिनुपर्ने !
राष्ट्रिय युवा परिषदको शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखी उद्यम सञ्चालन गर्न बिना ब्याज ऋण दिने वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ऋण लिनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी परिषदले सुचना प्रकाशन गरेको छ ।
साधरण शिक्षामा कम्तिमा स्नातक तह र प्राविधिक शिक्षामा कम्तिमा डिप्लोमा उत्तीर्ण गरि बेरोजगार रहेका देशैभरका ३५ (प्रत्येक प्रदेशबाट ५/५) जना युवालाई बिना ब्याज दुई लाख (२,००,०००) ऋण उपलबध गराइने भएको छ । त्यसका लागि आफुले सुरु गर्न लागेको व्यवसायको व्यावसायिक योजना संलग्न गरि दिइएको ढाँचा अनुरुपको निवेदनका साथ पठाउनु पर्नेछ ।
निवेदन २०७५ असार १९ गते भित्र बुझाईसक्नु पर्नेछ । थप जानकारी राष्ट्रिय युवा परिषदको वेबसाइट www.nyc.gov.np मा गएर पनि पाउन सकिन्छ अथवा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला युवा समितिका कार्यालयमा पनि सम्पर्क राख्न सकिनेछ । जिल्ला युवा समितिको कार्यालय वा सिधै राष्ट्रिय युवा परिषदको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा पनि ऋणका लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।
निवेदनका साथमा उल्लेखित कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपि
चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
लक्षित समूह खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
पछिल्लो पटक अध्ययन गरेको शिक्षण संस्थाको सिफारिस
उद्यम सञ्चालन हुने स्थानीय तहको सिफारिस
समूहमा उद्यम सञ्चालन गर्ने भए संस्था दर्ता, नवीकरण, प्रबन्धपत्र र नियमावलीका प्रमाणित प्रतिलिपि (समुहमा उद्यम सञ्चालन नगर्ने भएमा यो आवश्यक पर्दैन) ।
निर्देशिका निर्देशिका 773 kB
निवेदन र व्यावसायिक योजनाको ढाँचा निवेदन र व्यावसायिक योजनाको ढाँचा 370 kB